NET-360 ကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ် - World Trade Exchange
အခုတော့ဘာမှမဝယ်ဘယ်တော့မှပေးဆောင်! wte သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးကိုရောင်းအားနှင့်ထေမိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အကြွေးစစ်ဆေးစရာမလိုပါဘူး အပေါင်ပစ္စည်းမ ချေးငွေမလိုပါ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါ။ အကြွေးမရှိ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ
'NET-360' သည်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်အခြားကုမ္ပဏီများမှပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်အထောက်အပံ့များကိုတစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြွေးထောက်ပံ့သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ WTEသူတို့ရက်ပေါင်း 360 ပြီးနောက်ပြန်ဆပ်နိုင်သည့်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချေးငွေသည်အကျိုးအမြတ်ကင်းမဲ့သောငွေကြေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးလည်ပတ်နေသောအရင်းအနှီးကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်ပြီးတိုးတက်မှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငွေရေးကြေးရေးပြန်ပေးရန်မလိုပါ WTE ရက်ပေါင်း ၃၆၀ အကြာတွင်သင်၏ကြွေးမြီများနှင့်ဘဏ္obligationာရေးဆိုင်ရာတာဝန်များကိုဆပ်ရန်လိုအပ်သော ၀ င်ငွေကိုရရှိရန်ကူညီသည်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကအစီရင်ခံသည်မှာကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု၏ ၈၀% မှ ၉၀% သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေအပေါ်မှီခိုနေသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအကြွေးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကုမ္ပဏီများအတွက်ရေတိုဘဏ္ofာရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးဆုံးရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
နယူးယောက်ယူအက်စ် Federal Reserve Bank သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ချေးငွေစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး၏အဓိကအရင်းအမြစ်မှာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချေးငွေသည်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Wal-Mart အတွက်ကုန်သွယ်မှုအကြွေးသည်ရှယ်ယာရှင်များ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၏ ၈ ဆဖြစ်သည်
ဥပမာကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင် Wal-Mart သည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချေးငွေများကိုဘဏ်ချေးငွေများထက်အရင်းအနှီးအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Wal-Mart အတွက်ကုန်သွယ်မှုအကြွေးသည်ရှယ်ယာရှင်များ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၏ ၈ ဆဖြစ်သည်။
၀ ယ်သူများကိုရက် ၃၀၊ ၆၀၊ ရက် ၉၀ ပေးရသောကုန်သွယ်ရေးအကြွေးငွေကြေးများနှင့်မတူဘဲ၊ WTE NET-360 သည်အဖွဲ့ဝင်များကိုအခြားကုမ္ပဏီများထံမှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူပြီးရက် ၃၆၀ အကြာတွင်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ချေးငွေဆိုင်ရာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုအဖွဲ့ဝင်များအားကမ်းလှမ်းသည်။
အလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင်တို့အတွက်လုပ်ပြီးပြီ။
WTE သင်၏စျေးဝယ်စာရင်းရှိပစ္စည်းအားလုံးကို ၀ ယ်ရန်၊ ရောင်းသူများနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ သင့်ကိုယ်စားအဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများမှထောက်ပံ့ရေးစာချုပ်များ၊ ရောင်းချသူများအားပေးချေခြင်းနှင့်အချိန်မီသေချာစေရန်အရောင်းအ ၀ ယ်များအပါအ ၀ င်အတိုးကင်းစင်သည့်ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ပေးခြင်းအပါအဝင်သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်သည်။ သင့်ကိုယ်စားဝယ်ယူထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပို့ခြင်း။ အလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
WTE သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဝယ်ယူမှု၊ အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်များ၊ စာရင်း၏ ၀ ယ်ယူမှု၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူမှု၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သင်၏အကောင့်ထဲရှိငွေပမာဏအထိစွမ်းဆောင်ရည်၊ စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးစရိတ်များ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေသားမှသင်၏ပုံသေသို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုသင်မပေးရ။ သင်၏အကောင့်၌ကုန်သွယ်မှုအကြွေးကိုမည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့သုံးစွဲရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရပါ။ အားလုံးသင့်အတွက်ပြီးပြီ။
ဘာဖြစ်တာလဲ WTE TRADE ကို
သင့်အနေဖြင့်မည်သည့်ပမာဏနှင့်မျှအကန့်အသတ်မရှိအကျိုးစီးပွားကင်းလွတ်သောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချေးငွေငွေကြေးကိုမည်သည့်ပမာဏဖြင့်မဆိုရရှိရန်အာမခံထားသည်။ အကြွေးစစ်ဆေးမှုမလိုအပ်ပါ။ ချေးငွေညံ့ဖျင်းခြင်းသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်သမိုင်းမပြaနာမရှိပါ ဤအတိုးမဲ့ချေးငွေရရှိရန်အတွက်အပေါင်အာမခံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ သိုက်၊ ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ဘဏ္statementာရေးရှင်းတမ်းမလိုအပ်ပါ။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်တောင်းခံမှုအားသင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်လျှင်အာမခံချက် ၁၀၀% အာမခံချက်ရှိသည် WTE အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။
သင့်ဘက်မှငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ WTE သင့်အားပေးသောအကြွေးပမာဏကိုထေမိရန်လိုအပ်သည့် ၀ င်ငွေကိုရရှိရန်ကူညီသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, WTE သင်၏ကြွေးမြီများနှင့်ဘဏ္obligationာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သောအရောင်း ၀ င်ငွေကိုရရှိရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ WTE သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သောအကြွေးအန္တရာယ်၏ ၁၀၀% ကိုယူဆောင်လာသည်။
သင်ရယူနိုင်သောကုန်သွယ်ရေးအကြွေးပမာဏကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ သင်လိုချင်သည့်အတိုးမဲ့ချေးငွေပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလျံရှိပါစေအရေးမကြီးပါ။ သင့်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည် WTE အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်
သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ လည်ပတ်မှုအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များ၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်များ၊ စက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ ၀ ယ်ခြင်း၊ စာရင်း ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ စီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များတိုးချဲ့ခြင်း။
အဘယ်ကြောင့် wte ကုန်သွယ်ရေးအကြွေး?
ကြိုတင်ငွေမလိုအပ်ပါ - ကုန်သွယ်ရေးအကြွေး၏အဓိကအားသာချက်မှာသင်သည် ၀ ယ်ယူမှုပြုလုပ်ရန်ကြိုတင်ငွေအသုံးပြုရန်မလိုပါ။ ကြိုတင်ငွေသားပေးရန်မလိုပါ။ ဝယ်လက်များသည်ဝယ်လိုအားမြင့်မားသောအချိန်တွင်သိုလှောင်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်သည်လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီး၏အသက်သာဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ အခြားအလုပ်နေရာအရင်းအနှီးဘဏ္financeာရေးအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောဘဏ် overdraft၊ ငွေသားချေးငွေစသည်တို့သည်၎င်းတွင်အတိုးများပါ ၀ င်သည်။ ပေးအပ်ထားသည့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချေးငွေတွင်အတိုးမပါ ၀ င်ပါ WTE.
ဒါဟာအလိုအလျောက်ဘဏ္financeာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်တစ်ခုမှချေးငွေသို့မဟုတ်တိုးချဲ့မှုကိုရယူရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်မတူသည်မှာ WTE ကုန်သွယ်ရေးအကြွေးသည်စာရွက်စာတမ်းရှည်နှင့်အဖြေကိုစောင့်ရန်မပါ။ ၂၄ နာရီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတယ်
ခွင့်ပြုသည့်အခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနောက်ကျသောငွေပေးချေမှုဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ထားသည် WTE ကုန်သွယ်ရေးအကြွေး
၉။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချေးငွေကသင့်အားသင်မပါဘဲလုပ်စရာရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူစေနိုင်သည်။
၁၁။ အပေါင်ပစ္စည်းမလိုအပ်ပါ။ ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်အာမခံသို့မဟုတ်လုံခြုံမှုကိုမျှမပေးသင့်ပါ WTE.
၁၂။ စီးပွားရေးချေးငွေကိုတည်ဆောက်ပါ။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြွေးသည်သင့်အားစီးပွားရေးချေးငွေကိုထူထောင်ရန်ကူညီသည်။ အချို့သောအဓိကချေးငွေဌာနများသည်စီးပွားရေးအကြွေးရမှတ်များတွက်ချက်သောအခါကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြွေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။
ဘာကိုသုံးမလဲ WTE ကုန်သွယ်ရေးဘဏ္CRာရေးခ?
သင် ၀ ယ်နိုင်သည့်အကန့်အသတ်မရှိ။
သင်ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစာရင်း၏ဒီမှာနှိပ်ပါ။
စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ ချေးငွေစစ်ဆေးမ။ စုဆောင်းခြင်းမရှိပါ။ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိ! 24 နာရီအတွင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၁၀ ဘီလီယံအထိကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်ကိုရယူပါ
သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်ရှာဖွေနေပါသလား WTE သင်၏ငွေစီးဆင်းမှုကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲသင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေရန်သင့်အားအကြွေးဖြင့်ပေးမည်။ သင်လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလျံရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းအတွက်ကုန်ကျငွေဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၁၀ ဘီလီယံအထိရနိုင်သည်။
WTE ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ (သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ) ၌သင်ကြော်ငြာရန်ကူညီရန်အတိုးနှုန်းလုံးဝမရှိသည့်ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ကိုပေးလိမ့်မည်။ တနည်းပြောရရင်မင်းရဲ့ကြော်ငြာကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုမီဒီယာအမျိုးမျိုးမှာပေးချေလိမ့်မယ်။
လူနေအိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးအတွက် $ 10m မှ $ 10b TRADE KREDIT ကိုရယူပါ
WTE လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်သင့်အားအတိုးမဲ့ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုံးဝမပေးနိုင်ပါ။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြွေးကိုစျေးဝယ်စင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ရုံးအဆောက်အအုံများစသည့်စီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းများကိုတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းချေးငွေများကိုဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရှိပြီးသားအဆောက်အအုံကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ယူခြင်း (သို့) ရှိပြီးသားအဆောက်အ ဦး များကိုချဲ့ထွင်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်တွေ့ကျကျစောင့်ဆိုင်းရမည့်အချိန်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများတောင်တန်းများသို့မဟုတ်ရိုးရာငွေချေးသူများ၏ရူးသွပ်သောအရည်အချင်းများမရှိတော့ပါ။ WTE ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ချေးငွေဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊
စက်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် $ 10m မှ $ 10b TRADE KREDIT ကိုရယူပါ
WTE သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင်လိုအပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ ၁၀၀% အထိငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတိုးနှုန်းသုညချေးငွေကိုပေးလိမ့်မည်။
၂၄ နာရီအတွင်းမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆိုရရှိရန် $ 10m မှ $ 10b TRADE KREDIT ကိုရယူပါ
WTE ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငွေမဖြုန်းဘဲ ၀ ယ်ယူရန်သင့်အားကူညီရန်အတိုးမဲ့သုညချေးငွေကိုပေးလိမ့်မည်။
တစ်ခုလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတစ်ခုဝယ်ယူရန် $ 10m မှ $ 10b TRADE KREDIT ကိုရယူပါ။
WTE ၀ ယ်ယူခြင်းသဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သင့်အတွက်ကြိုတင်ငွေမပေးသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၊ စက်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာတစ်ခုလုံးကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အတိုးနှုန်းမရှိသည့်ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ကိုပေးလိမ့်မည်။ buyback သဘောတူညီချက်အရ, WTE စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်နည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ပြီးထိုစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုငွေပေးချေရန်သဘောတူသည်။
၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေ ၁၀% မှ ၁၀ ဒေါ်လာမှ ၁၀ ဒေါ်လာအထိကုန်သွယ်ရေးရရန်
WTE သွင်းကုန်သို့မဟုတ်ပို့ကုန်အတွက်အတိုးနှုန်းလုံးဝမရှိသည့်ချေးငွေနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင့်အားပေးမည်
ကုန်ကြမ်းများထောက်ပံ့ရေးအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၁၀ ဘီလီယံအထိကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်ကိုရယူပါ
ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများထောင်ပေါင်းများစွာဝယ်ယူရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၁၀ ဘီလီယံအထိကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်ကိုရယူပါ။
WTE စက်မှု၊ ကွန်ပျူတာ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ လုံခြုံရေး၊ အများကြီးပို။ ပိုမိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ PDF အစီရင်ခံစာကိုရယူရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
$ 10m မှ $ 10b အကြွေးလျှော့ချရေး CREDIt ကိုရယူပါ။
ငွေမဖြည့်ဘဲသင့်ရဲ့ကြွေးမြီတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးစားနေသလား။ WTE သင်၏ကြွေးမြီအားလုံးသို့မဟုတ်အတော်များများကိုဆပ်ရန်သင့်အားကူညီရန် 0% အတိုးဖြင့်ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ပေးထားသောချေးငွေလုပ်ငန်းအတွက်အတိုးနှုန်းမရှိပါ။ စိတ်ဝင်စားမှုကင်းတယ် အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင့်ရဲ့အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့မကူညီနိုင်ရင်အသုံးစရိတ်ဘယ်တော့မှပြန်မပေးရဘူး။
ကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်၏ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၁၀ ဘီလီယံရှိသောစီးပွားရေးလိုင်းကိုရယူပါ
ချေးငွေကိုသင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဘဏ္safetyာရေးလုံခြုံမှုပိုက်ကွန်အဖြစ်စဉ်းစားပါ။ သင်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်တာဝန်မရှိပါ။ သင်၎င်းကိုအသာပုတ်ပါက၎င်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလိုအပ်မှုကိုမဆိုဖုံးလွှမ်းရန်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
သမားရိုးကျစီးပွားရေးချေးငွေနှင့်မတူသည်မှာသင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းမှ ၁၀ ဘီလီယံအထိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုငွေချေးရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သင်အသုံးပြုတဲ့ငွေကြေးအပေါ်ငွေပမာဏကိုမပြည့်ဘဲပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
$ 10m မှ $ 10b BUSINESS BANKRUPTCY ၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာခရက်ဒစ်ကိုရယူပါ
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒေဝါလီခံရန်အတွက်ဖိုင်များတင်သောအခါ၊ သမားရိုးကျဘဏ်ငွေကြေးရရှိရန်သင်၏စွမ်းရည်သည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးကုမ္ပဏီများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဒေဝါလီခံခြင်းမှာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်လက်ရှိဒေဝါလီခံခြင်းသို့မဟုတ်အတိတ်ကာလကဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်တင်သွင်းသူဖြစ်ရန်ငွေကြေးလိုအပ်နေသည်ဆိုပါကသင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်စေရန်သင်၏ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုအန္တရာယ်မပေးနိုင်ပါ။
အခြားဘဏ်များနှင့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပေးအပ်ခြင်းမပြုမီသင်၏ဒေဝါလီခံခြင်းအခြေအနေ၊ ခရက်ဒစ်ရမှတ်၊ ၀ င်ငွေ၊ ငွေသားစီးဆင်းမှု၊ အပ်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အပေါင်ပစ္စည်းအာမခံ၊ အကြွေးမဆိုငွေပမာဏ။
ပေးထားသောချေးငွေအပေါ်အတိုးမပေးပါ။ စိတ်ဝင်စားမှုကင်းတယ် အရေးအကြီးဆုံးကတော့မင်းတို့ရဲ့အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ဖို့ငါတို့ကူညီမပေးရင်ပြန်ပေးစရာမလိုဘူး။ သင့်အားလိုအပ်သောချေးငွေများပေးပြီးနောက်ကြွေးမြီကိုထေမိစေရန်လိုအပ်သော ၀ င်ငွေကိုထုတ်ပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။
၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ wte clients များ
ရေနံချက်စက်ရုံတစ်ခုမှဒေါ်လာ ၂.၈ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်ရေနံချက်စက်ရုံမှဒေါ်လာ ၂.၈ ဘီလီယံရရှိသည်။ WTE ကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ငွေရရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီခဲ့သည်။
BIOPHARMACEUTICAL COMPANY သည်ဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်အာမခံပစ္စည်းသို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းမပါဘဲဇီဝဆေးဝါးကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်။ WTE ကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ငွေရရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီခဲ့သည်။
မတည်မငြိမ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံဖြင့်ဆပ်ပေးခဲ့သည်။
ဘဏ်များသို့ဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံအကြွေးတင်နေသောအကြွေးတင်နေသောကြွယ်ဝသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသည်စွမ်းအင် ၂၀% တွင်နေ့စဉ်လည်ပတ်နေပြီးဘဏ္lossesာရေးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်စေသည်။ WTE ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းကုန်သွယ်မှုအကြွေးငွေကြေး။
ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီသည်အပေါင်ပစ္စည်းအာမခံမရှိဘဲဒေါ်လာ ၇၅၀ သန်းရရှိခဲ့သည်
ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှအပေါင်ပစ္စည်းလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းမပါဘဲဒေါ်လာသန်း ၇၅၀ ရရှိခဲ့သည်။ WTE ကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ငွေရရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီခဲ့သည်။
သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာ ၁၄.၈ သန်းရရှိခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှသံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာ ၁၄.၈ သန်းကိုအပေါင်အာမခံသို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းမပေးဘဲရရှိခဲ့သည်။ WTE ကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဝင်ငွေရရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီခဲ့သည်။
တစ် ဦး က ဦး ဆောင်လေယာဉ် $ 2.7B ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်သောလေကြောင်းလိုင်းသည်ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလီယံကိုအာမခံပစ္စည်းသို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းမပေးဘဲရရှိခဲ့သည်။ WTE ကြွေးမြီကိုဆပ်ဖို့ကုမ္ပဏီကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကုန်သွယ်မှုအကြွေးကိုလိုချင်သည်ဆိုပါစို့။
World Trade Exchange အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည် -
၁။ အသင်း ၀ င် ၀ ယ်သူစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ၀ ယ်ယူမှုများ၊ ဝယ်ယူမှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အတိုးမဲ့လွတ်ကုန်သွယ်ရေးဘဏ္creditာရေးချေးငွေအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကိုအသင်း ၀ င်ကိုပေးပါ။
၂။ အသင်း ၀ င်အား ၀ င်ငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ပေးသောချေးငွေကို အသုံးပြု၍ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကူညီပေးပါ။
၃။ အသင်း ၀ င်အားအခြားဘဏ်များ၊ ဘဏ္organizationsာရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများသို့ပေးဆပ်ရန်ရှိနေသည့်ကြွေးမြီများကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အသင်းဝင်ကိုကူညီပါ။
၃။ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းနေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်သားအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များ၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်များ၊ စက်ယန္တရားများနှင့်စက်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ခြင်း၊ စာရင်း ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသုံးစရိတ်များ၊ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးစရိတ်များ။
ကုန်သွယ်ရေးချေးငွေသတ်မှတ်ချက်များ contd ။
၅။ ကြွေးတင်နေသောကြွေးမြီများကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောအရောင်း ၀ င်ငွေကိုအသင်း ၀ င်ကိုအသင်းဝင်ကိုကူညီပါ
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, WTE ကြွေးမြီများနှင့်ဘဏ္obligationsာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အဖွဲ့ဝင်အားကူညီလိမ့်မည်။
6. အသင်း ၀ င်များအား ၀ ယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ ကြိုတင်၍ ရောင်းအားအချိန်ဇယားအရ ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ရရှိရန်အာမခံသည့်အသင်း ၀ င်ကိုကူညီပါ။ အသင်း ၀ င်သည်နောင်အနာဂတ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၁၂ လတာအချိန်ဇယားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
၇။ အသင်း ၀ င်ရောင်းဝယ်မှုအစီအစဉ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသင်း ၀ င်ကိုကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို ၂၄ နာရီအတွင်းသုညကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ၊ ကြော်ငြာခြင်း၊
၈။ အသင်း ၀ င်များ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားလုံး၏အောင်မြင်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်အာမခံပါ။
အဖွဲ့ဝင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုငွေပြန်ဆပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ပစ္စည်းရရှိပြီးရက်ပေါင်း ၃၆၀ အကြာတွင် WTE အသင်း ၀ င်များ၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ရောင်းအားဖြင့်ဤချေးငွေကိုပြန်လည်ပေးရမည်။ WTE အသင်း ၀ င်အားပေးရမည့်ချေးငွေကိုထေမိစေရန်လိုအပ်သောအရောင်း ၀ င်ငွေကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်အသင်း ၀ င်များအားကြွေးမြီများပြန်ဆပ်ရန်ကူညီရမည်။ အဆိုပါအသင်းဝင်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အားလုံးအရောင်းအမိန့်ကိုဖြည့်ဆည်းရလိမ့်မည် WTE ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်အပြည့်အဝပြန်ဆပ်မှီတိုင်အောင်။